Baarlamaanka Soomaaliya oo Akhrintii Sedexaad mariyay Sharciga Maareynta Musiibooyinka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Baarlamaanka Soomaaliya oo Akhrintii Sedexaad mariyay Sharciga Maareynta Musiibooyinka
Baarlamaanka Soomaaliya oo Akhrintii Sedexaad mariyay Sharciga Maareynta Musiibooyinka
Guddoomiyaha Golaha shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa bilowga kulanka Baarlamaanka waxa uu sheegay in mooshinka Baarlamaanka ay soo gudbiyeen ee ahaa dhowrista Xasaanadda baarlamaanka ay Wali Diyaar u yihiin guddoonka Barlamaanka.
Xildhibaannada Baarlamaanka ayaa intaasi kaddib waxa uu Akhrinta saddexaad mariyay Sharciga Maareynta Musiibooyinka iyadoo baarlamaanka uu sharcigaan dib ugu soo celiyay guddiga Arrimaha Gudaha Baarlamaanka.
Guddoomiye kuxigeenka guddiga Arrimaha Gudaha ee Baarlamaanka Daahir Amiin jeesow ayaa sheegay in sharcigaan uu ka kooban yahay 12 qodob isla markaana qodobadiisa badanaa uu ka hadlayo ahmiyadda in la helo sharciga maareynta musiibooyinka.
khadiijo Maxamed Diiriye oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa sheegtay in Haweeka xildhibannada ay ka mideysan yihiin Hanaanka geeddi socodka siyaasadda Dalka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in Doorka haweenka ee Dhanka Siyaasadda uu ku qeexan yahay Dastuurka.
Previous articleTaliyaha CXD Dalka oo Sheegay in Ciidanka Badda Soomaaliya ay Howl wanaagsan u hayaan Shacabka iyo Dalka
Next articleRa’iisal wasaare ku-xigeenka oo ka qayb galay xuska 51aad ee Ciidanka Badda
Cillad ku timid diyaarad uu saarnaa guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle
Qoraal maanta ka soo baxay guddiyada doorashooyinka iyo xallinta khilaafaadka ee lagu muransan yahay walina ay ka maqan yihiin xubnihii qaban lahaa doorashooyinka Jubbaland...